Email HTML + Tags Alt = Bagels maro hafa amidy | Martech Zone
Talata, Janoary 26, 2010 Talata, Janoary 26, 2010 Douglas Karr
Androany alina aho dia nahazo mailaka avy tamin'i Mofo Panera. Toy ny programa mailaka marobe ankehitriny, ny mailaka ataoko dia manakana ny sary ho azy. Vokatr'izany dia izao no endrik'ilay mailaka:
Tsy dia mahasarika… indrindra ho an'ny mailaka tsara tarehy toa izao:
Tsy azoko an-tsaina hoe firy ny olona namafa ilay mailaka raha tsy namaky azy aho satria… tsy nisy na inona na inona novakiana raha tsy nisintona ireo sary ianao. Tena olana io amin'ny mailaka HTML… saingy tena tsotra ny misoroka.
Fomba fanao roa tsara indrindra hanampiana hanokatra sarany amin'ireo mailaka HTML
Aza mampiseho lahatsoratra toy ny sary… asehoy azy ho toy ny lahatsoratra. Azo antoka fa tsy ho tsara tarehy loatra izy io, fa hovakiana ihany - fahasamihafana lehibe. Tokony handrava ny sary sy ny soratra amin'ny mailaka i Panera. Mety ho naka minitra vitsy minitra ny mpamorona azy ireo, saingy afaka nivarotra bagel maro hafa izy ireo!
Raha toa ka niasa tamin'ny fampiasana mailaka HTML miorina amin'ny sary 100% ireo mpamorona dia afaka nampiasa izy ireo ny zava-drehetra tag amin'ny sary tsirairay mba hanampy lahatsoratra mahasarika. Ho an'ny isan-jaton'ny mpamaky izay manana programa manakana ny sary, azon'izy ireo natao ny namaky farafaharatsiny ny fonosana Salmon Salmon Mediteraneana vaovao, Asiago Bagel Breakfast Sandwich, Black Cherry Smoothie ary Morning Bagel avy amin'ny atin'ny tag alt.
Ny fandaniana minitra vitsy fanampiny ary hamenoana ireo taganao alt (alt dia lahatsoratra hafa ary aseho rehefa tsy misy ny sary) dia hanatsara ny tahan'ny fisokafanao sy ny tahan'ny fiovam-po amin'ny mailaka HTML toy izao. Toa ireo mailaka ireo dia novolavolaina niaraka tamin'ny Fishbowl… Ny fahalalako azy dia manana tonian-dahatsoratry ny mailaka mandroso amin'ny endriny rehetra amin'ny fampiharana azy ireo izay manohana an'io.
Sarin-teny momba ny fibaikoana sakafo… ary tsy isalasalana fa ny lahatsoratra manintona sasany dia hisarika mpamaky maro kokoa hisintona ireo sary ary hanampy ny adiresy mailaka amin'ny lisitra azony antoka.
Ary koa, mino aho fa maro ny mailaky ny mpamatsy tolotra Internet izay tsy misy atiny ary sary avokoa satria fomba iray handefasan'ireo spammer amin'ny laoniny izany. Panera dia mety hanatsara ny tahan'ny fandefasana azy amin'ny alàlan'ny fampiasana lahatsoratra bebe kokoa ao anaty mailaka.
Tags: blackberry mifanohitra amin'ny iphonefanentanana marikafandavanafanapahan-kevitra mividyfihetseham-pofikarohana ara-tsosialy
Mifanaraka amin'ny teknolojia ve ny marketing?